एकै प्रकृतिको दुर्व्यवहारमा अस्थामाथि किन अन्याय? « Deshko News
एकै प्रकृतिको दुर्व्यवहारमा अस्थामाथि किन अन्याय?
ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि गायिका आस्था राउतले दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । तर, उस्तै प्रकृतिको घटनामा पूर्वयुवराज पारस शाहमाथि भने कारबाही त के प्रश्नसमेत सोध्ने आँट गरेका थिएनन् । २ भदौमा पारसले त्रिभुवन विमानस्थलमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपात गरेका थिए।
पारसले ड्युटीमा रहेका प्रहरी नायव निरीक्षक ईश्वर खत्रीमाथि हातपात गरेका थिए। उनले खत्रीलाई धकेलाधकेल मात्र गरेनन्, बारम्बार कुट्न झम्टिएका थिए । यो दृश्य तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भयो।
दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि पारसमाथि प्रहरी कारबाही अघि बढ्नुपर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने आबाज उठ्न थाल्यो । तर विमानस्थल प्रशासन तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीले पारसलाई कारबाही गर्नेतर्फ कुनै चासो दिएनन्।
ठीक यही प्रकृतिको घटना यतिबेला सर्वत्र चर्चामा छ । गएको बिहीबार भारतको सिक्किममा कन्सर्ट गर्न भद्रपुर उड्ने लागेकी आस्था राउतले ड्युटीमा रहेकी प्रहरी महिला रमिता श्रेष्ठलाई औँला ठड्याएको र अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरी यति सक्रिय भयो कि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो ।
कुरा यत्तिमै सीमित भएन, प्रहरीले उनलाई फरार कोटीमा पनि राखेको छ । यो खबर आज बिहीबार प्रकाशित भएको शुक्रबार साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।